बुढानीलकण्ठ नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। यो काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर तर्फ शिवपुरी डाँडाँको काखमा रहेको छ । यस मन्दिरमा हरिबोधनी अर्थात ठूलो एकादशीको दिन ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ । असार महिनामा पर्ने हरिशयनी एकादशीमा सुतेका भगवान विष्णु भगवान निद्राबाट ब्युँझने र संसार नियाल्ने धार्मिक विस्वासकै कारण यसदिन त्यस ठाँउमा मेला
तेह्रथुम जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिका–५ र लालीगुराँस नगरपालिका–९ को संगमस्थल पिंगुवा खोलामा रहेको शिवथान मन्दिर पौराणिक धार्मिक महत्व बोकेको मन्दिर हो । तर यो मन्दिर आवश्यक संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेको छ । मन्दिरको धार्मिक महत्व प्रचारमा ल्याउन र उचित प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा ओझेलमा परेको हो । ﻿ खोलाको
गणेश भगवानको दर्शन गरि आज आइतबारको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : व्यापार व्यावसायमा तत्काल लगानि गरिहाल्ने समय नरहेकोले केहि दिन पर्खनुहोला । आर्थिक अभावले कामहरु रोकिने तथा समयमा सम्पादन नहुँदा मानशिक तनाब बढ्नेछ । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्नेछ भने घर परिवारमा तथा पति पत्नि बिच राय बाजिनेछ । ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईको काममा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु सिर्जना
– बिहानै उठेर तपाईको पहिलो नजर दुध या दहीले भरिएको भाँडोमा पर्छ भने सम्झनुहोस् केही शुभ हुनेवाला छ । – विहानै शंख, मन्दिरको घन्टीको आवाज सुनिनु पनि शुभको संकेत हो । – यदि कुनै व्यक्तिलाई विहान उठ्नेवित्तिकै उखुको बोट तथा उखु देखिन्छ भने पनि भिवष्यमा धन सम्बन्धी मामलामा सफलता प्राप्त
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – अकर्मण्यता र लापरवाहीका कारण बन्नलागेको कुनै काम अन्तिम समयमा बिग्रन पनि सक्छ, त्यसैले आज लगनशील र विवेकपूर्वक काम गर्नुपर्छ । चञ्चलता र घमण्डले अप्ठ्यारामा परिन्छ । ढिलो हुनसक्छ, तर सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ । मुद्दामामिला र झैझगडाबाट
थाहा पाउनुस : तपाई कुन महिनामा जन्मिनु भयो? कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कस्ता हुन्छन्
ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।जन्मेको महिना अनुसार तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ थाहा पाउनुस्ः बैशाख महिना बैशाख महिनामा जन्मिएका मानिसहरु भोगी सर्व सुख युक्त, धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका, रुपवान, स्त्रीहरुलाई माया गर्ने
संसारभरि नै कुकुरको बफादारीका कथा प्रशस्तै छन्। भारतमा भएको एउटा घटनाले अर्काे एउटा कथा थपेको छ। कुकुरले आफू मरेर मालिकको ज्यान जोगायो। तमिलनाडु राज्यमा पर्ने तन्जावुर शहरमा दुई हप्ताअघि भएको घटना हो यो। किसान नटराजन बगैँचामा काम गरिरहेका थिए। यत्तिकैमा उनको अगाडि पाँच फिट लामो गोमन सर्प देखियो। सर्प फणा
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर
ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिको भविष्य जन्मकुण्डी र राशी अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ । ज्योतिषहरुले नै व्यक्तिको भविष्य कस्तो जीवन साथी असल हुन्छन् भन्ने बारे बताएको हुन्छ । जीवन जीउन जो कोहीको लागि असल साथीको खाँचो पर्छ । सुख दुख साट्ने एउटा माध्यम हो प्रेमी प्रेमीका । प्रेमको विषयलाई लिएर केटा
अनौठो ढुंगा: जसको भित्री भागमा मासु हुन्छ र फुटेपछि रगत बग्छ !
ढुंगा निर्जीव वस्तु हो र यसलाई फुटाउँदा टुक्रा टुक्रा हुन्छ । तर एउटा यस्तो ढुंगा भेटिएको छ जसलाई फुटाउँदा रगत र मासुका टुक्रा निस्कन्छन् ।चिली र पेरुका समुद्रमा यस्ता ढुंगा टन्नै पाइन्छन् । ढुंगालाई सर्र हेर्दा सामान्य झैं लाग्छ । तर यसबाट मासु निस्कन्छ र बजारमा त्यो खुबै बिक्छ ।ढुंगालाई